दाइ ! अब केटो खोज्ने बेला भो
पुष्पा काफ्ले काठमाडौं, २५ फागुन
म साँहिली छोरी । मभन्दा माथि २ जना दिदी, तलका २ बहिनी । म परेँ बीचकी ।
४ कक्षा पढ्दादेखि हो मैले दिदीको जुत्ता र कपडा लगाउन थालेको । म ६ कक्षा पढ्दा बहिनीहरूले पनि यसरी नै मेरा जुत्ता र कपडा लगाए ।
त्यसबेला शायद बुबाआमासँग कम पैसा थियो, दशैँमा कपडा ल्याउँदा पनि हामी सबैलाई एउटै रङको हुन्थ्यो ।
टीकाको दिन वा आमासँग टीका थाप्न लहरै बस्दा हामी उस्तै देखिन्थ्यौँ । मख्ख पर्दै गफ गर्थ्याैँ– तँलाईभन्दा मलाई नि बढी सुहाएको छ’ भन्दै ।
यी त भए बालापनका कुरा । त्यस बेला वर्षमा एक दिन आमा कहिले थाल, कहिले प्ले कार्ड बोकेर जुलुसमा जानुहुन्थ्यो । अहिले गम्दा लाग्छ, आमा महिला दिवसका दिन ‘महिला अधिकार’का विषयमा हुने गोष्ठी र र्‍यालीमा भाग लिन शहरसम्म जानुहुँदो रहेछ ।
बेलुका आएर उहाँले भात नपकाएसम्म हामी कसैको पेट भरिन्नथ्यो । आमा अहिले पनि यी काम निरन्तर गरिरहनुभएको छ ।
भन्नुहुन्छ, ‘छोरीले घरधन्दामा ध्यान दिने हो वा आमासँग मात्र बजार जाने हो ।’
आमाले त्यसो भनेकाले होला, हामी छिमेकीको व्रतबन्धमा जाँदा पनि बाको पछि लागेर जान्थ्यौँ । घुँडाभन्दा तलसम्म आउने जामा लगाएर गाउँका बिहे, व्रतबन्धमा जाँदा गाउँले भन्थे, ‘छोरी नछुने हुने बेला भइसकेछ दाइ ! अब केटो खोज्ने बेला भो ।’
गाउँलेले यसो भनेको मेरा कानले सुनेको १५ वर्षपछि मैले आफैँले खोजेको केटासँग बिहे गरेँ ।
१० कक्षा पढ्दा शैक्षिक भ्रमणमा जानुअघि आमाले सोध्नुभएको थियो, ‘केटी साथी पनि जाँदै छन् ?’
त्यो दिन मलाई लाग्यो, साथी भनेका त केटी मात्र हुन् ।
एक दिन आमालाई सोधेँ, ‘आमा, हामीले केटासँग हिँड्न हुँदैन ?’
आमाले भन्नुभयो, ‘छोरीले छोरा मान्छेसँग हिँड्ने होइन, उनीहरू र हाम्रो काम नै फरक छ ।’
‘किन आमा ?’
‘थाहा छैन, मलाई पनि मेरी आमाले भनेर थाहा पाएको’, उहाँले दिएको यो छोटो उत्तरमा चित्त बुझाएर १ वर्ष बिते मेरा ।
आमाले यसो भनेको अर्को वर्षबाट मैले आमाका कुरा मान्न छाडेँ– कम्तीमा पुरुषका मामलामा ।
क्याम्पस भर्ना भएपछि बाआमासँगको बसाइ सकियो । क्याम्पस गएपछि तेस्रो साथी पुरुष बने । तर, तीसँग धेरै दिन सङ्गत भएन । भन्थे, ‘तिमेरु आइमाई हौ, घरधन्दा गर्ने आइमाईसँग के सङ्गत गर्नु ?’
धेरैपछि थाहा भयो, कलेजका ती तेस्रा साथी अहिले घरमा छोराछोरीको रेखदेख गर्छन् । बिहान १० बजे बच्चा स्कुल पठाउने, अपराह्न ४ बजे लिन जाने, खाजा, खाना बनाएर खुवाउने उनको नियमित दैनिकी हो ।
उनकी श्रीमती सरकारी जागिरे भएका कारण ‘घरधन्दा गर्ने आइमाईसँग सङ्गत नगर्ने’ ती मेरा कलेजका तेस्रा साथी पनि अचेल नारी अधिकारका कुरा गर्दै हिँड्छन् रे !
समय बदलिएको छ । राज्यका सबै अंगमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको छ । नाइट बसका सिटमा समेत ‘महिला आरक्षण’ लेखिएको छ ।
महिला अधिकारलाई संविधानले ग्यारेण्टी गरेको छ । घुँडामुनिसम्मको जामा लगाउने म (हामी) जस्ता महिलाहरू कम्मरमुनि अलिकति भाग छोप्ने लुगा लगाएर अफिसदेखि डिस्कोसम्म एक्लै जान थालेका छौँ ।
तर, ३३ प्रतिशत संख्याको बहस गर्दागर्दै कामको बाँडफाँटमा भने पुरुष र महिला भनिहाल्छौँ ।
भात पकाउने काम महिलाको ठान्छौँ । भाँडा मोल्ने पनि आफ्नै काम ठान्छौँ । बच्चा जन्माउने त प्राकृतिक कुरा भयो, के कुरा गर्नु । बच्चालाई तेल लगाउने आफ्नो ठान्छौँ, सुई लगाउन अस्पताल जानचाहिँ श्रीमान् चाहिहाल्छ हामीलाई ।
बजार जान बहिनी होइन, भाइको साथ चाहिन्छ । कसैले सोध्यो भने भन्छौँ, ‘भाइ आँटिलो छ ।’
भाइलाई आँटिलो ठानेर बहिनी कमजोर बनाउने त हामी आमा, दिदी नै हौँ नि !
वर्षमा एक दिन महिला अधिकारका कुरा गर्छौं । संविधानले दिएको संख्यात्मक अधिकार सुनिश्चितताको बहस गर्छौं तर हामीले कहिल्यै गुणात्मक सुधारका कुरा गरेनौँ ।
छोरीलाई नर्स बनाउने दिमागले जुन दिन डाक्टर बनाउने सोच्दैन, तबसम्म आजजस्तै हामीले वर्षमा एक दिन महिला दिवस भन्दै पुरुषसँगै अधिकार मागिरहनुपर्नेछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फागुन २५, २०७६, ०४:५२:००